Fatih Terim – Tabobarihii Xulka Turkey -Oo Loo Eryey Dagaal Dhex Maray Mulkiile Hudheel
HomeWararka MaantaFatih Terim – Tabobarihii Xulka Turkey -Oo Loo Eryey Dagaal Dhex Maray Mulkiile Hudheel
Tabobarihii xulka kubadda cagta qaranka Turkey – Fatih Terim ayaa shaqada ka tagay laba todobaad kadib markii uu dagaal gacan ka hadal ahi dhex maray isaga iyo nin hudheel ku haysta magaalo loo tamashle tago oo ku taala gobolka xeebta galbeed ee dalka Turkiga, sidaasna waxaa warsaxaafadeed ku sheegay, xidhiidhka kubada cagta Turkey ee magaciisa loo soo gaabiyo (TFF) Arbacadii.
Odeygan 63 jirka ah ee hore u soo layl-yey kooxaha Fiorentina, AC Milan iyo Galatasaray, ayaa laga daawaday muuqaalo lagu baahiyey telefishanada qaarkood, isagoo la dagaalamaya nin hudheel cuntada lagu cuno haysta.
Warbaahinta Turkiguna waxay sheegtay in dagaalkaas oo uu ku wehelinayay wiil uu soddog u yahay, ay ku dhaawaceen sideed qof oo hudheelka ku sugnaa.
‘Arin aan shuqul ku lahayn kubadda cagta ayaa shaqadiisii ka galaafatay tabobarahayagii kubadda cagta ee xulka, Fatih Terim,’ ayaa lagu yidhi, qoraalka Arbacadii uu soo saaray xidhiidhka TFF.
‘Labada dhinca ( Tabobare Terim iyo xidhiidhku ) waxay isku af-garteen in aad uga caafimaad badan tahay labada dhinacba in lagu kala tago wada shaqaynta ,’ayuu qoraalku intaas ku daray.
Muuqaalo Video oo dhacdadani laga duubay, ayaa muujinayay, tabobare Terim oo feedhtamaya, ilaa markii dambe lagu kala guntaday oo uu meherada dibada uga baxay.
Dadkii gudaha ugu sugnaa hudheelka ayaa la arkayay oo ka firxanaya dagaalka gondahooda ka qarxay.
Tabobare, Terim wuxuu xilka Macamilinimo ee xulka Turkey la wareegay bishii August 2013, sanadkiisii u horeeyeyna wuxuu ku guuldaraystay inuu qarankaas u soo saaro tartanka Koobka aduunka – ka hor intii aanu xooga saarin inuu u bed-baadiyo booska ka qayb gal ee tartankii Euro 2016.
Croatia 1-0 Turkey: Modric Oo Gool Qurux Badan Ku Garaacay Arda Turan iyo Xiddgaha Turkey
12/06/2016 Abdiwahab Ahmed